October 2014 - သန်လျင်သားနည်းပညာ
(Laptop) (ခေါ်) ခရီးဆောင်ကွန်ပြူတာသုံးသူများ သတိထား
General Knowledge For All (ခေါ်)အင်တာနက်သတင်းလွှာမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ရက် သောကြာနေ့ က ဖော်ပြသွားတဲ့ ကျမ္မာရေးပညာပေး သတင်းဆော င်းပ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 20:58:00
MB Assassin (September 2008)မောက်စတိုင်
အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါလေးကတော့ကွန်ပျူတာကလိနေတဲ့ဘော်ဘော်တွေအတွက်တင်ပေးလိုက်တာပါ မောက်စတိုင်လေးပါ ဘယ်လိုအင်စတောလုပ်ရလဲဆိုတာ video နဲ့ရှင်းပြပေးထား...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 09:49:00
Labels: COMPUTER (မောက်စတိုင်)
မင်္ဂလာပါ Windows အတွက် All in One Media Player တခုဖြစ်တဲ့ DivX Plus 10.0.1 Build 1.10.1.362ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးထွက် Version အသစ်ေ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 00:50:00 No comments:
Labels: Player(ဆိုင်ရာ), Softwares(ဆိုင်ရာ)
Facebook မှာ Password မေ့သွားလို့ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမယ်လဲ......?
Facebook မှာ Password မေ့သွားလို့ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမယ်လဲ......? facebook မှာ lock ဖြစ်သွားတဲ့ အကောင့် တွေလည်းအများကြီးပါ။တကယ်တော ...
facebook လော့ ကျသွားလို့ စိတ်ညစ်နေလား .......? စိတ်မညစ်ပါနဲ့တကယ်တော့ လတ်တလောပြောင်းလဲသွားတဲ့ policy တွေကြောင့် facebook ကလုံခြုံေ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 22:17:00
မင်္ဂလာပါဒါလေးက wondershare ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေထဲမှ Data တွေကို Rrecover ပြန်လုပ်နိုင်တဲ့ Utilitiesကောင်းလေးတခုဖြစ်ပါတယ်။ မိမိ ကွန်ပြူတာထဲက မှား...
မင်္ဂလာပါ တောင်းထားတဲ့သူငယ်ချင်းလေးအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ဖိုင်နည်းနည်းတော့ကြီးတယ်ခွဲတင်ပေးထားပါတယ်လူကြိုတ်များတဲ့ဂိမ်းလေးပါနော်အားလုံးလဲသ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 10:21:00 No comments:
Labels: ပိုက်ပိုက်နဲ့ပေးဝယ်ရသောAndroid (APK)များ
မင်္ဂလာပါ တောင်းထားတဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ဖိုင်ထည့်ရတာလဲလွယ်ကူပါတယ် အလုံးပေါင်းဖိုင် ၃ ဖိုင်ရှိပါတယ် တစ်ခုဆီဒေါင်းပါ data ဖို...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 04:41:00 No comments:
Labels: ပိုက်ပိုက်နဲ့ပေးဝယ်ရသောAndroid game(ဆိုင်ရာ)
မင်္ဂလာပါအရမ်းကိုဆော့ကောင်းတဲ့ ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဂိမ်းလေးပေါ့ ညကနမည်မရေးတက်လို့တောင်ညီငယ်လေးတစ်ယောက်ကိုရေခိုင်းပြီး လိုက်ရှာရတယ် အရင်ကဆော့ဖူ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 20:36:00 No comments:
Car game Android (ဆိုင်ရာ)
Need for Speed™ Most Wanted v1.0.50 APK [Mod] [FAIZAN]
မင်္ဂလာပါကားဂိမ်းလန်းလန်းလေးတွေမှကြိုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်နဲ့တူတဲ့ဘော်ဘော်တွေ အတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အင်တာနတ်မလို ဆော့နိုင်တဲ့ဂိမ်းလေးပါ PLA...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 12:10:00 No comments:
Labels: Car game Android (ဆိုင်ရာ)
KASPERSKY ANTIVIRUS & INTERNET SECURITY 2014 + ACTIVATION [danhuk]
လိုင်စင်သက်တမ်း (၃၁၉)-ရက်(KIS)၊လိုင်စင်သက်တမ်း (၂၁၈)-ရက် (KAV) ရတဲ့ Kaspersky Antivirus and Internet Security 2014 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကီး...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 03:01:00 No comments:
Eset NOD32 Smart Security7+ ACTIVATOR
မင်္ဂလာပါ နောက်ဆုံးထွက် Version အသစ်နဲ့ Antivirus ဆော့ဝဲတခုဖြစ်တဲ့ Eset NOD32 Smart Security7ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ x32 နဲ့ x64 တဖိုင်စီ သီး...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 00:09:00 No comments:
RENDERS DE ANIMALES DE PRIMAVERA(4)
မင်္ဂလာပါ photoshop video တည်းဖြတ်ဝါဒနာညီငယ်တွေအတွက်အသုံးဝင်စေမယ့် ပုံဖြတ်ပြီးသား PNG ဖိုင်လေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် တခြားနေရာတွေမှာလဲလိုအ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 04:21:00 No comments:
Android Tool APK(ဆိုင်ရာ)
မင်္ဂလာပါ ဒါလေးကတော့ အရမ်းကိုအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကိုတိုင်သုံးပြီးသဘောကျလို့ ကျွန်တော်ညီငယ်လေးအတွက်ကော ဘော်ဘော်တွေသံ...
Labels: Android Tool APK(ဆိုင်ရာ)
မင်္ဂလာပါ ခုတင်ပေးလိုက်တာလေးကတော့ မိမိဖုန်းထဲကDataတွေကို Backup လုပ်ပြီးသိမ်းထားနိုင်တဲ့ My Backup Root လေးပါ နောက်လုပ်လို့ရတဲ့ဟောလေးတွေလဲရှိ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 03:04:00 No comments:
(Laptop) (ခေါ်) ခရီးဆောင်ကွန်ပြူတာသုံးသူများ သတိထာ...
Facebook မှာ Password မေ့သွားလို့ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမယ...
Wondershare Data Recovery 4.5.0.16 (DC 04.04.2014)...
Need for Speed™ Most Wanted v1.0.50 APK [Mod] [FAI...
KASPERSKY ANTIVIRUS & INTERNET SECURITY 2014 + ACT...
Fallen Nation v1.1.3 (apk+obb)သရုပ်ဘာသာနဲ့
Wild Blood (686 MB)
Direct X 11 Full Version (Offline Installer)
Java Runtime Environment 8u20 Build b05 Early Acce...
DriverEasy PRO 4.7.2.18340 PreActivated
Driver Pack Solution 13 R-380 Lite Edition
Driver Navigator 3.4.8.14348 PreActivated
Firecoresoft Splendvd 1.0.8 Build 08.06.14 + Key
McAfee Labs Stinger 12.1.0.887(32-64)
IObit Malware Fighter PRO v2.4.1.18 Multilingual
ESET NOD32 ANTIVIRUS7CRACK (32 64 BIT) THADOGG
Bitdefender 2015 Total Security Beta x32-Bit
ဘလော့မှာ adfly ခံပြီး ဒေါင်းလင့်ပေးနည်း
PowerISO 6.0 Multilingual (x86-x64)
Huawei Honor 3C 4G H30-L02 - V 4.4.2 Official Firm...
Internet Download Manager (IDM) 6.21 Build 14 Fina...
faceboo နှင့် youtube မှ video များအလွယ်ဒေါင်းနည်း...
Corel MotionStudio 3D v1.0.0.252 Incl Keygen(400 M...
BurnAware Premium 7.1 Final Multilanguage
wedding frames (Android)
မိမိ FB ပေါ်မှာ tag မဝင်အောင်လုပ်နည်း စာဝင်ရေးမရအော...
Allok Video Converter v4.6.0529 + seria
TypingMaster Pro လက်ကွက်ရိုတ် ဆော့ဝဲ
မိမိ facebook ရဲ့ wall မှာ တစ်ခြားသူ တင်ခွင့်မရအော...
Android Jelly Bean Firmware(I9205XXUCNA2 TPH Portu...
PES_2012 android game
Wise Care 365 v.3.23.281 + Keys (5.09 Mb)
Auslogics Disk Defrag Pro 4.4.0.0 (Crack) PreActiv...
ACDSee Pro 8 (32-bit & 64-bit)-(139 Mb)
အင်တာနက်မလို Offline ကစားနိုင်တဲ့ Football Manager...
Windows 10 Technical Preview (32-bit+64-bit) (2014...